I-Cactus Encane - I-Mountain View Apt Eduze nolwandle - I-Airbnb
I-Cactus Encane - I-Mountain View Apt Eduze nolwandle
Batroun, North Lebanon Governorate, i-Lebanon
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nana & Raed
U-Nana & Raed Ungumbungazi ovelele
Indawo lapho ungabuka khona umbono omuhle wentaba usuka ethafeni, kuyilapho ujabulela nomhlobiso we-bohemian ngazo zonke izinhlobo ze-Cacti. Indlu ilungile uma ufuna ukuchitha isikhathi uwedwa noma nomlingani/nomngane wakho. Indawo iqinisekisiwe ukuthi iyona ehamba phambili. Ulwandle luphambi kwendlu imizuzwana engama-30 uhamba ngezinyawo. Ungafinyelela izindawo zokudlela ezihamba phambili, amabha, amagumbi okuphumula, amakilabhu nezingosi zamasiko e-Batroun ngokuhamba okungu-<5min.
Amafulethi ethu afakwe ohlwini lwezindlu ezingu-10 ezihamba phambili eLebanon.
Ifulethi lihlotshiswe kahle kakhulu. Uma uthanda okuluhlaza, kunenqwaba yohlobo lwe-cactus okufanele ukwazi ngalo. Ifulethi liyisitudiyo. Inegumbi lokuphumula, i-mezzanine yokulala ngombono omangalisayo wentaba ekuseni, i-balcony enezihlalo zokujabulela isimo sezulu esihle nokubuka, indawo yokugezela kanye nekhishi.
Ukuhamba kungase kube matasa, futhi ngokuvamile sonke sivame ukukhohlwa izinto ezimbalwa lapho sisohambweni. Ngizozama ukukunikeza noma yini engingayenza ukuze ngenze ulwazi lwakho lungabi nasici. Uzothola okungezansi phezu kwazo zonke izinsiza ezishiwo kuleli khasi:
- I-shampoo nejeli yokugeza
Ngihlala ngitholakala uma kwenzeka udinga noma yini :)
Indawo yase-Bahsa iyindawo engcono kakhulu e-Batroun endala. Ibhishi liqhele ngamamitha angama-20, izindawo zokudlela nezindawo zobumnandi zikuhambo lwemizuzu emi-5.
Ibungazwe ngu-Nana & Raed
Izivakashi zamukelekile kakhulu ukuthi zingithinte nganoma yisiphi isicelo. Kuzo zonke izimo, mina noma ozobamba naye uzoba sebhilidini uma kwenzeka udinga okuthile
UNana & Raed Ungumbungazi ovelele